Format တစ်ခုက Mac ရဲ့ Drive ကိုအတူ Disk Utility (OS X ကို 10.11)
Disk Utility (နောက်ပိုင်း OS X ကိုအယ်လ် Capitan သို့မဟုတ်) ကိုသုံးပြီးတစ်ဦးနဲ့ Mac ရဲ့ Drive ကို Format ချ
၏ထွန်းနှင့်အတူ OS X ကိုအယ်လ် Capitan Apple ကဘယ်လိုအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲလုပ် Disk Utility အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီ app အသစ်တခု် user interface ကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် OS X ကို 10,11 တလျှောက်မရောက်မှီ Disk Utility ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အသုံးပြုကြောင်းအနည်းငယ် features တွေပျောက်ဆုံးရဲ့။
ဒါဟာ Disk Utility အချို့သောအခြေခံ feature များပျောက်ဆုံးကြောင်းကိုရှာဖွေနည်းနည်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သိပ်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ features တွေမရှိတော့ကြောင့် OS X နှင့် MacOS အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲပြီလမ်း, လိုအပ်နေပါသည်။
ဒီလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာကျနော်တို့ကို Mac ရဲ့ drives တွေကိုသို့မဟုတ် disk တွေပုံစံကြည့်ယူတာပေါ့။ ငါ Disk Utility အမည်ပြောင်းလဲမှုရှိသည်လိမ့်မယ်, တစ်ချိန်ချိန်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ထင်; ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သံလိုက်မီဒီယာလှည့်ကိုရည်ညွှန်းသောဝေါဟာရကို disc ကို, ဖွယ်ရှိတော်တော်လေးမကြာမီ Macs များအတွက်မူလတန်းသိုလှောင်မှုနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုအခါမူကားမှီတိုင်အောင်, ကျွန်တော်တစ်ဦးသိပ်ကျယ်ပြန့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုက Mac ကိုသုံးနိုင်သည်ဆိုသိုလှောင်မှုမီဒီယာပါဝင်သောတဟူသောဝေါဟာရကို disc ကိုသုံးစွဲဖို့တာပေါ့။ ဒါက hard drive တွေ, CD, DVD, SSDs, ပါဝင်သည် ကို USB flash drive ကို နှင့် Blade ကို flash drive ကို။
ကျွန်မကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်း Disk Utility ဖို့အပြောင်းအလဲများကို OS X ကိုအယ်လ် Capitan နှင့်အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပေမယ့်အဲဒီအပြောင်းအလဲများနှင့် Disk Utility App ကိုအတူလုပ်ကိုင်ဖို့အသစ်ကလမ်းရှေ့ဆက်သွား Mac OS နဲ့အပေါငျးတို့သအသစ်များဗားရှင်းသက်ဆိုင်သောဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုအောင်ချင်ကြတယ်။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည် MacOS Sierra ။
ဝံပုလှေမွန်း, Inc ၏ screen shot ယဉျကြေး
Disk Utility အားလုံးတစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို disk တွေ, ပတျသကျ, များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထောက်ပံ့ volumes ကို , ဒါမှမဟုတ် partitions ကို ။ ကျနော်တို့မခွဲခြားဘဲအမျိုးအစားကို၏တစ်ဦး drive ကို format မှ Disk Utility ကိုသုံးပါတာပေါ့။ ဒါဟာပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပင်လျှင်အရေးမပါဘူး, သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦး hard drive ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရဲ့လျှင် SSD ကို ။
အဆိုပါပုံစံချပေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ် partition ကိုမြေပုံအတွက်ရွေးချယ်ထားသော drive ကို format များနှင့်သင့် Mac drive ကိုမှအတူအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်သင့်လျော်သောဖိုင်စနစ်ကလျှောက်ထားမည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျဖိုင်မျိုးစုံကိုစနစ်များ, volumes ကိုနှင့် partitions ကိုမဆံ့မယ့် drive ကို format နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာစံ OS X ကိုတိုးချဲ့ (Journal) ဖိုင်စနစ်ဖြင့်ချပ်တစ်ခုတည်း partition ကိုအတူတစ် Run-Of-The-ကြိတ် drive ကိုအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
သတိပေးချက်: drive ကို format လုပ်၏ဖြစ်စဉ်ကိုလက်ရှိတွင်စက်ပစ္စည်းတွင်သိုလှောင်ထားသောဒေတာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင် drive ပေါ်တွင်လက်ရှိရှိပြီးသားဆိုဒေတာကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရည်ရွယ်လျှင်သင်တစ်ဦးသည်လက်ရှိ backup လုပ်ထားပြီသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်တို့ရှိသမျှအစုံဆိုရင်, 's Page2ရက်နေ့တွင်မယ်သဖြင့်စတင်ရန်ကြကုန်အံ့။
Disk Utility နဲ့ Drive ကိုကို format မှခြေလှမ်းများ
၏လုပ်ငန်းစဉ် တစ် drive ကို format လုပ် မကြာခဏအသံအတိုးအကျယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်အတူရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခြားနားချက်ပုံစံချပေးမယ့်အသံအတိုးအကျယ်ဖျက်ခြင်း့အသံအတိုးအကျယ်ကိုသာသက်ရောက်စဉ်ပေါ်မှာဖန်တီးခဲ့ကြပြီဆို volumes ကိုနှင့် partitions ကိုအပါအဝင်တစ်ခုလုံးကို drive ကို, အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် partition ကိုသတင်းအချက်အလက်များဖျက်ဆီးတော်မမူကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကပြောသည်ခံရကြောင်း, Disk Utility ၏ဗားရှင်း OS X ကိုအယ်လ် Capitan နှင့်အတူထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အကြာတွင်အမှန်တကယ်စကားလုံး format ကိုမသုံးပါဘူး, အစား, တက drive ကို၏ပုံစံချခြင်းနှင့်အမည်တူနဲ့ volume ၏ပယ်ဖျက်နှစ်ဦးစလုံးကိုရည်ညွှန်း: အားဖျက်မည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦး drive ကို format လုပ်လိမ့်မယ်နေချိန်မှာဒီတော့ကျနော်တို့ Disk Utility ရဲ့ Erase command ကိုသုံးပါမယ်။
Disk Utility နှင့်အတူတစ် Drive ကို Format ချ
အတွက် / Applications ကို / အသုံးအဆောင်များတည်ရှိသော Disk Utility, စတင်ရန်။
ထိပ်ဖျား: Disk Utility ကိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ရှိသည်ဖို့တစ်နေရာလေးကို App ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါအကြံပြု အဆိုပါဆိပ်ကမ်းကဖြည့်စွက် ။
သင့် Mac နဲ့ချိတ်ဆက် drives တွေကိုနှင့် volumes ကိုစာရင်းတစ်ခုပါရှိသည်သောလက်ဝဲလက် pane ထဲကမှ, သင် format နဲ့ရန်ဆန္ဒရှိ drive ကို select လုပ်ပါ။ (Drives volumes ကိုပြီးအင်တင်းခဲ့သည်နှင့် drives တွေကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေါ်ထွန်းအတူထိပ်တန်း-Level Device များဖြစ်ကြသည်။ Drives ကိုလည်းအသံအတိုးအကျယ်အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်သို့မဟုတ်ဝှက်သုံးနိုငျသောသူတို့အားလာမယ့်တစ်ဦးထုတ်ဖော်တြိဂံရှိသည်။ )
ရွေးချယ်ထားသော drive ကိုဖွင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုတစ်ဦး partition ကိုမြေပုံ, စွမ်းရည်နှင့် SMART status ကိုအပါအဝင်ပြသပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Disk Utility window ၏ထိပ်မှာ Erase ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, ဒါမှမဟုတ် Edit menu ကိုထံမှ Erase ကိုရွေးချယ်ပါ။
တစ်ဦးက panel ကိုရွေးချယ်ထား drive ကိုဖျက်ခြင်း drive ကိုပေါ်မှာရှိသမျှ data တွေကိုဖျက်ဆီးမည်ကိုသင်တို့အားသတိပေး, စက်စက်ကျပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစသင်ဖန်တီးတော့မည်သစ်ကိုအသံအတိုးအကျယ်အမည်ကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ပုံစံအမျိုးအစားနှင့်သုံးစွဲဖို့ partition ကိုမြေပုံအစီအစဉ် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါ Erase panel တွင်သင်သည်ဖန်တီးတော့မည်ပမာဏများအတွက်နာမည်အသစ်ရိုက်ထည့်ပါ။
အဆိုပါ Erase panel တွင်အောက်ပါထံမှရွေးဖို့ drop-down Format ကိုလယ်ကွင်းကိုအသုံး:
OS X ကိုတိုးချဲ့ (Journal)
OS X ကိုတိုးချဲ့ (ဖြစ်ရပ်မှန်-အထိခိုက်မခံ, Journal)
OS X ကိုတိုးချဲ့ (Journal, Encrypted)
OS X ကိုတိုးချဲ့ (ဖြစ်ရပ်မှန်-အထိခိုက်မခံ, ဂျာနယ်များ, Encrypted)
OS X ကိုတိုးချဲ့ (Journal) ကို default အနေနဲ့ Mac အတွက်ဖိုင်စနစ်, နှင့်အသုံးအများဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသူတွေကြှနျုပျတို့သညျဤအခြေခံလမ်းညွှန်ထဲမှာသို့မသှားမညျဖွစျကွောငျးတိကျသောအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုကြသည်။
အဆိုပါ Erase panel ကိုမှာရွေးဖို့ drop-down အစီအစဉ်လယ်ကွင်းကိုအသုံး partition ကိုမြေပုံအမျိုးအစား :
GUID Partition ခွဲမြေပုံ
Apple က Partition ခွဲမြေပုံ
GUID Partition ခွဲမြေပုံကို default ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်နှင့် Intel Processor တွေကိုသုံးပြီးအားလုံး Macs အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားရွေးချယ်စရာနှစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အဘို့ဖြစ်ကြ၏တစ်ဖန်ကျနော်တို့ကဒီတစ်ကြိမ်မှာသို့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ထိုလိုအပ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်ပါ။
အဆိုပါ Erase panel တွင်သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုအပေါငျးတို့သရာ၌ခန့်ထားပြီပြီးနောက်, Erase button ကို click လုပ်ပါ။
Disk Utility သင့် Mac ရဲ့ Desktop ပေါ်မှာဖန်တီးတပ်ဆင်ထားခံရတစ်ခုတည်း volume ထဲမှာရရှိလာတဲ့, ရွေးချယ်ထားသော drive ကိုဖျက်ပစ်နဲ့ format ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Done ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒါက Disk Utility ကိုသုံးပြီး drive ကို format လုပ်၏အခြေခံမှလည်းမရှိအားလုံးပါပဲ။ ငါဖော်ပြထားလုပ်ငန်းစဉ်ရွေးချယ်ထားသော drive ကိုပေါ်မှာရှိသမျှရရှိနိုင်အာကာသသုံးပြီးတစ်ခုတည်းအသံအတိုးအကျယ်ကိုဖန်တီးပေးသတိရပါ။ သငျသညျမျိုးစုံ volumes ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါက, သင့်ရဲ့ Drive ကိုလမ်းညွှန် partitioner ကမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်း Disk Utility ကိုကြည့်ပါ။
ဒါ့အပြင်အချိန်ပေါ်သွားသည်အဖြစ် Disk Utility ၏ Erase option ကိုအတွက်စာရင်း Format ကိုများနှင့်အစီအစဉ်အမျိုးအစားများအပြောင်းအလဲများကိုရပါလိမ့်မယ်ကိုသတိထားပါ။ တစ်ချိန်ချိန် 2017 ခုနှစ်တွင်ပိုမြင်ထွက်ရှာတွေ့ခြင်းငှါ, Mac အတွက်အသစ်တခုဖိုင်စနစ်၏တစ်ထို့အပြင်ရှိလိမ့်မည်:
APFS (အဘို့ Apple ရဲ့နယူး File System ဆိုတာဘာလဲ MacOS )?
သင့်ရဲ့ Mac ပေါ်တွင်နယူး User Accounts များကို Creating
ကိုယ်တိုင်သင့်ကို Mac ပေါ်မှာ Fonts Install လုပ်နည်း
ဆယ်တင်ရေး Partition ခွဲအပေါ်, Mac OS ၏ဗားရှင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လုပ်နည်း
သင့်ရဲ့ Mac ကိုရဲ့ဟာ Cover Flow ကြည့်ရန် Options ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကိုဘယ်လို
စာလုံးစာအုပ်နှင့်အတူ Mac ကို Fonts ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့ Mac ကိုမှ Startup စာမျက်နှာအသံထည့်သွင်းခြင်း
Time Machine အမှားပြုပြင်တာတွေ - အ Backup ကို Volume ကိုသာလျှင် Read ဖြစ်ပါတယ်
သင့်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာနှင့်အတူ Terminal နှင့်အပေါ်ကြည့်ရန် Hidden Files and Folders
သင့်ရဲ့ Mac အတွက်အတူတစ် Multi-Button ကိုကြွက်အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
PowerPoint 2007 ခုနှစ်လျှောနံပါတ်အရွယ်အစားကိုတိုးပှားဖို့ကိုဘယ်လို
Yahoo! အတွက်ဆက်သွယ်ရန်နေစာပို့စာရင်းဖန်တီးနည်း မေးလ် Classic
SimCity4မှာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးနေရာများအသုံးပြုနည်းအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း Learn
အဆိုပါ 8 အကောင်းဆုံးကင်မရာများကိုလက်အောက်တွင် $ 300 2018 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူ
အားလုံး LCD ကိုတီဗီဒါ့အပြင် HDTV ဖြစ်ပါသလား
တွစ်တာပေါ်မှာ Retweet ဆိုတာဘာလဲ
ဘယ်လိုပန်ဒိုရာစခန်းများဖန်တီးလိုက်တဲ့နှင့်မည်သို့သူတို့ကို Customize မှ
အခြေခံပညာနှင့်အဆင့်မြင့် iPod ကိုကားစတီရီယို Connection ကိုလမ်းညွှန်
Yahoo! မှတဆင့်အခြားအီးမေးလ်အကောင့် Check လုပ်နည်း စာပို့
တစ်ဦး Blackhole RAT ကဘာလဲ?
SOHO router များနှင့်ကွန်ရက်များရှင်းလင်းချက်
အဆိုပါ iPod ကို nano များ၏သမိုင်း
တစ်ဦး XLL ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
နယူး 80GB နှင့် 60GB Play Station3အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်အသေးစိတ်
Minecraft Xbox One မှာ Edition ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (XONE)